अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुचारु गर्न संयन्त्र «
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुचारु गर्न संयन्त्र
सरकारले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सुचारू राख्नका लागि उच्चस्तरीय रयापिड रेस्पोन्स टिम (दु्रत प्रतिकृया समूह) बनाइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणाली सुचारू राख्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय टिम बनाएको हो । सो टिमले आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोध तत्काल हल गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरू पनि तोकिदिएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापनको हकमा प्रेमकुमार श्रेष्ठ, स्थानीय प्रशासनको सहयोग तथा आवागमन सहजताको हकमा जनकराज दाहाल, कृषिजन्य तथा पशुजन्य सामग्री आपूर्तिको विषयमा डा. श्रीराम घिमिरे र उत्पादनशील उद्योगको हकमा नारायणप्रसाद दुवाडी र वैदेशिक व्यापारको हकमा डा. नारायणप्रसाद रेग्मीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति प्रणालीमा केही समस्या आएमा ती व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न पनि भनेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिरका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
टोलीले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा सुरक्षा सामग्री उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी तथा वितरण प्रणाली सुचारू बनाइराख्ने, तरकारी, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ढवानी गर्ने सवारीसाधनमा परिचय खुल्ने व्यानर साथ तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात संकलन एंव अनुगमन गरी सोको अध्यावधिक प्रतिवेदन मन्त्रालयलमा पठाउनुपर्ने छ ।
यसैबीच, काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुका पसल बिहान १० सम्म र बेलुका पाँच बजेदेखि ७ बजेसम्म खुला गर्न पाइने छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष पनि सोही समयसम्म खोल्न पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेकाले अभाव नहुने बताए पनि उपभोक्ताले भने खरिद गरेर सञ्चय गर्न थालेका छन् । अभाव हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताले चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, तेल, पिठो, आलु, ग्यास जम्मा गरेर राख्न थालेका हुन् । खाद्य तथा किराना पसमा सामान खरिद गर्ने ग्राहकको भीडभाड लागेको छ ।
दुई दिनमा दोब्बर इन्धन वितरण
दुई दिनको अवधिमा बजारमा इन्धनको खपत झण्डै दोब्बरले बढेको छ । बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा हुने भएपछि अधिकांश ग्राहकले सवारीसाधनमा तेल भर्न थालेपछि खपत पनि बढेको हो । बिहीबार उपत्यकाका अधिंकाश पेट्रोल पम्पमा तेल भर्ने उपभोक्ताको लामो भीड थियो ।
नेपाल आयल निगम थानकोट डिपो प्रमुख अभिषेक ठाकुरले मंगलबार र बुधबार दोब्बर परिणाममा डिजेल पेट्रोल वितरण भएको जानकारी दिए । मंगलबार एक हजार किलोलिटर डिजेल र पेट्रोल पनि एक हजार किलोलिटर खपत भएको उनले जानकारी दिए । बुधबार पनि सोही परिणाममा डिजेल पेट्रोल वितरण भएको उनले बताए ।
सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक ६ देखि ७ सय किलोलिटर पेट्रोल र ८ देखि ९ सय किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको थियो । डिजेल पेट्रोलको मौज्दात पर्याप्त रहेकोले अभाव नहुने निगमले जानकारी दिएको छ । सबै डिपोमा ८० प्रतिशत इन्धन भरेर राखेको निगमले जानकारी दिएको छ । यस्तै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको पनि अभाव नभएको निगमले जनाएको छ ।